Thursday,3Jan, 2019 12:58 PM
न फुट्छु भन्दा फुट्ने सुविधा छ, न जुट्छु भन्दा जुट्ने वातावरण नै । नेपालका ६ थरि मधेसी दललाई परिस्थितिले यस्तो मजबुरीमा पारेको हो ।
राजपाका नाममा एकजुट भएको उक्त पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन एक हप्ताभित्र फिर्ता लिन्छौँ त भन्यो, तर त्यो समय गुज्रिएको पनि हप्तै नाघिसकेको छ । यसमा पनि उही ‘मजबुरी’ कै कुरा आउँछ । उनीहरूको मागअनुसार संविधान संशोधन किन भएन ? वास्तविकता के हो भने, राजपा फुट्दैन र संविधान संशोधन पनि तत्काल हुँदैन । यसको चुरो कुरा हो, तीन प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड ।
यस्तो संवैधानिक प्रावधानकै कारण राजपा एक भएको थियो । र, फेरि पनि राष्ट्रिय मान्यता नपाउने कारण फुट्ने सम्भावना कम छ । यद्यपि, उनीहरू आफू आफैँमा मारामार भने जारी छ । २ नम्बर प्रदेशका सचेतककै नेतृत्वमा अध्यक्षको पुत्ला दहन गर्ने, एकापसमा प्रवेश निषेधजस्ता कार्यक्रम बनाउनेजस्ता काम भइरहेका छन् । न जुट स्वाभाविक थियो, न फुट नै स्वाभाविक भएको छ । संविधानले हानेको अगुल्टोले अहिले राजपालाई हानेको हो । यस्तो खड्गो पार गर्न उपेन्द्र यादवले राजपासामु एकताको चारो फ्याँकेका छन् । यही बुझेर ओलीले महन्थ र राजेन्द्रलाई सरकारमा आउनुस्, तत्काल संविधान संशोधन सम्भव छैन भनेका छन् । समर्थन फिर्ता गर्ने धम्की दिइँदा सत्तारुढ दलले भन्ने गरेका छन्– ‘केन्द्रमा फिर्ता लिए हामीमाथि पनि कार्यकर्ताको दबाब पर्छ, २ नं. मा तपाईंहरूको सरकारचाहिँ कसरी टिक्छ नि ?’ किनकि मधेशको सबभन्दा ठूलो पार्टी (३२ सीटसहित) पनि नेकपा नै हो । त्यहाँ काँग्रेसको १९ सिट छ ।